Xisbiga KULMIYE oo Gudbiyey Beddelka Xubintii Komishanka Doorashooyinka ee Is casishay | WWW.SOMALILAND.NO
Xisbiga KULMIYE oo Gudbiyey Beddelka Xubintii Komishanka Doorashooyinka ee Is casishay
Posted on Maajo 13, 2008 by weriye1
Hargeysa sl.no) 13 may 2008 – Xisbiga mucaaradka ah ee KULMIYE, ayaa beddelka xubintii Komishanka Qaranka u gudbiyey Madaxweynaha, kadib markii uu toddobaadkii hore xilkii
xubnnimadii Guddiga Doorashooyinka iska casilay Md. Xirsi Cali X. Xasan oo uu hore xisbigu ugu soo xulay.
Ma jiraan warar faahfaahsan soo baxay dhinaca masuuliyiinta KULMIYE. Haseyeeshee sida ay Warar Xogogaal ahi xalay u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah oo u dhuundaloola xisbiga KULMIYEa, waxa beddelka xubinta xisbiga KULMIYE u asteeyey in uu noqdo Maxamed Cabdalle Biikalo, isla markaana qoraalka magacaabistiisa xisbigu u gudbiyey Madaxweyne Rayaale si uu ugu gudbiyo
Golaha Wakiillada oo iyagu leh ansixinta xubnaha noqonaya Komishanka Doorashooyinka Qaranka.
Komishanka Doorashooyinka oo ka kooban toddoba xubnood oo ay xulistooda kala leeyihiin Madaxweynaha oo saddex xubnood soo magacaaba, Guurtida oo laba xubnood soo magacaaba iyo labada xisbi mucaarad oo laba xubnood soo kala xula, ayaa hadda waxa ka shaqeeya oo tirada Komishanka ka soo hadhay shan xubnood oo ay ka maqan yihiin labadii xubnood ee ay soo xuleen axsaabta mucaaradku, kuwaas oo labadoodaba looga saaray Komishanka asbaabo kala duwan.
Xubintii matalaysay xisbiga UCID ayaa xubnaha kale ee Komishanku ku eedeeyeen inuu ku kacay falal anshax-darro, sidaa daraadeed waxay u gudbiyeen Madaxweynaha qoraal ay ku sheegeen in aanay xubintaasi la shaqayn karayn ee Guddiga Doorashooyinka laga saaro,
sidaas ayaana loogaga saaray xubintaas. Sidoo kale xubintii uu soo xulay xisbiga KULMIYE, ayaa isna xubnaha Komishanku ku eedeeyeen inuu warbaahinta siiyey hadal aanay isla ogayn Komishanku, waxaanay ka qaadeen jagadii Guddoomiye-ku-xigeenka, isaguna waxa uu 20 daqiiqo kadib ku dhawaaqay inuu iska casilay xubinimadii Guddiga Doorashooyinka Qaranka gebi ahaanba.
« Hillary Clinton oo loo malaynayo in ay hadhi doonto bisha 6aad Munasabada 18 May Oo Si Weyn Looga Xusi Doono Oslo »